ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ အမျိုးသမီးနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ အူဝဲ နဲ့ မားဂျူး တို့နဲ့ အတူ ကြော်ငြာ​ရိုက်ကူးရေးပြုလုပ်နေတဲ့ ဖွေးဖွေး – Cele Oscar
ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ အမျိုးသမီးနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ အူဝဲ နဲ့ မားဂျူး တို့နဲ့ အတူ ကြော်ငြာ​ရိုက်ကူးရေးပြုလုပ်နေတဲ့ ဖွေးဖွေး
ပရိသတ်ကြီးရေ ပြည်သူ ချစ် အနုပညာရှင် ဖွေးဖွေး ကတော့ အနုပညာ လမ်းကြောင်းမှာ အောင်မြင်မှု များစွာကို ရရှိထားသူဖြစ်ပြီး အကောင်းဆုံး အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု (၃)ဆု ကိုပိုင်ဆိုင် ထားသူတစ် ယောက်ပါ။ကျရာဇာတ်ကောင် ကို ပီပြင်အောင် ကြိုတင် ပြင်ဆင်မှုတွေ နဲ့အတူ စိတ်ရောလူ ရောအားထည့်ကာ အမြဲ ကြိုတင် ပြင်ဆင်မှုတွေ နဲ့ အနုပညာ ဝမ်းစာကို အပြည့်ဖြည့် တတ်သူပဲ ဖြစ်ပြီး အနုပညာ အလုပ်အပေါ် ဝါသနာကြီး သူတစ်ယောက်လို့ ဆိုရမှာပါ။
လက်ရှိမှာ လည်း အနုပညာ လောကမှာ သူမရဲ့စီနီယာ ညီအစ်မတွေ လိုချစ်ရတဲ့ အနုပညာလောက ရဲ့ ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ ဆရာတစ်ဆူ ဖြစ်တဲ့ အူဝဲ နဲ့ အတူ ရိုက်ကူးရေးပြုလုပ် နေကြောင်း ကို ” ဟိတ်…. ဘာ ကြော်ငြာရိုက်နေလဲ သိလား…?”ဆိုတဲ့စာလေး နဲ့ အတူ ပရိသတ်တွေကို မေးခွန်းထုတ် မေးမြန်းခဲ့တာပါ။ပရိသတ် တွေရဲ့ပြည်သူ့ အချစ်တော် Influencers တစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ မားဂျူးလည်း ပါဝင် နေတာကြောင့်ပရိသတ်တွေ ကတော့ ဒိတ်ဒိတ် ကြဲ၃ယောက်ရဲ့ ရှူန င်ပူရိပ် လေးတွေငိုကြည့်ပြီး ချစ်မဝ ဖြစ်နေကြတာပါ။
ပရိသတ် တွေကော ဖွေးစိန် ၊ အူဝဲ နဲ့ မားဂျူး တို့၃ ယောက်ပေါင်းကာ ဘာကြော်ငြာ ရိုက်ကူးနေလဲ ဆိုတာ ခန့်မှန်းမိ ရင်မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါဦးနော်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီး အားလုံး သာယာ ပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေး တစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင် နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်း ပေးလိုက် ပါတယ်နော်။
ပရိသတျကွီးရေ ပွညျသူ ခဈြ အနုပညာရှငျ ဖှေးဖှေး ကတော့ အနုပညာ လမျးကွောငျးမှာ အောငျမွငျမှု မြားစှာကို ရရှိထားသူဖွဈပွီး အကောငျးဆုံး အမြိုးသမီးဇာတျဆောငျဆု (၃)ဆု ကိုပိုငျဆိုငျ ထားသူတဈ ယောကျပါ။ကရြာဇာတျကောငျ ကို ပီပွငျအောငျ ကွိုတငျ ပွငျဆငျမှုတှေ နဲ့အတူ စိတျရောလူ ရောအားထညျ့ကာ အမွဲ ကွိုတငျ ပွငျဆငျမှုတှေ နဲ့ အနုပညာ ဝမျးစာကို အပွညျ့ဖွညျ့ တတျသူပဲ ဖွဈပွီး အနုပညာ အလုပျအပျေါ ဝါသနာကွီး သူတဈယောကျလို့ ဆိုရမှာပါ။
လကျရှိမှာ လညျး အနုပညာ လောကမှာ သူမရဲ့စီနီယာ ညီအဈမတှေ လိုခဈြရတဲ့ အနုပညာလောက ရဲ့ ဒိတျဒိတျကွဲ ဆရာတဈဆူ ဖွဈတဲ့ အူဝဲ နဲ့ အတူ ရိုကျကူးရေးပွုလုပျ နကွေောငျး ကို ” ဟိတျ…. ဘာ ကွျောငွာရိုကျနလေဲ သိလား…?”ဆိုတဲ့စာလေး နဲ့ အတူ ပရိသတျတှကေို မေးခှနျးထုတျ မေးမွနျးခဲ့တာပါ။ပရိသတျ တှရေဲ့ပွညျသူ့ အခဈြတျော Influencers တဈယောကျ ဖွဈတဲ့ မားဂြူးလညျး ပါဝငျ နတောကွောငျ့ပရိသတျတှေ ကတော့ ဒိတျဒိတျ ကွဲ၃ယောကျရဲ့ ရှူန ငျပူရိပျ လေးတှငေိုကွညျ့ပွီး ခဈြမဝ ဖွဈနကွေတာပါ။
ပရိသတျ တှကေော ဖှေးစိနျ ၊ အူဝဲ နဲ့ မားဂြူး တို့၃ ယောကျပေါငျးကာ ဘာကွျောငွာ ရိုကျကူးနလေဲ ဆိုတာ ခနျ့မှနျးမိ ရငျမှတျခကျြပေးခဲ့ပါဦးနျော။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ ပရိသတျကွီး အားလုံး သာယာ ပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေး တဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျ နိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျး ပေးလိုကျ ပါတယျနျော။